Somaliland: Dal U Tafo-Xaytay Inuu Wada Jir Kaga Lib-keeno Qadiyadiisa Bislaatay | Somaliland.Org
June 28, 2012	Somaliland waxay mar kale caalamka dhegaha adag u soo bandhigtay heerka ay ka gaadhay hanaanka dimuqraadiyadda furfuran ee saldhiga ay u tahay tallo-wadaag iyo wada tashigu.
Waxa kale oo ay Somaliland xaqiijisay sida siyaasiyiinta kala afkaarta duwan ay haddana uga midaysan yihiin difaaca iyo iib-geynta qadiyadda madax-banaanidda qarankan.
“Waxay ahayd tallaabo yididiilo gelisay bulshadda samaha jecel ee reer Somaliland. Waxaan ku diirsanay in xukuumadda Somaliland oo dalka ku dhaqaysa hanaan uu bisayl siyaasadeed ka muuqdo inay weftiga la soo xaajoonaya Madaxweynaha Somalia ay ku dareen Madaxweynihii hore Md. Daahir Rayaale Kaahin isla amrkaana ah Guddoomiyaha xisbiga UDUB,”ayuu yidhi Maxamed Ismaaciil oo ka mid ah dadka reer Hargeysa ee sida weyn ula socda arrimaha siyaasaddu.
Waxa rayul caamka bulshaddu 24-kii saacadood ee la soo dhaafay si weyn ugu hadal hayeen goobaha barkulanka dadweynaha sawirradii TV-ga ka soo baxay ee muujinayay madaxweynihii hore iyo ku xigeenkiisii oo ka qeyb galay xafladii lagu qabtay madaxtooyadda ee lagu xusayay 52-guuradii ka soo wareegtay markii Somaliland ay xornimadeeda ka qaadatay Boqortooyaddii Ingiriiska 26-kii bishii June 1960-kii. Waxaanay arrintan ku sifeeyeen sida xukuumadda Axmed Siilaanyo ay u xeerinayso midnimada.
Waxa kale oo ay dadka fikradan qabeen u sii riyaaqeen markii weftiga madaxweynaha ee u baqoolayay wadanka Imaaraadka carabta lagu soo daray Madaxweynihii hore ahna Guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee UCID.
Waxay tallaabadani ka dhalatay bisayl siyaasadeed oo ka yimid labada Hoggaamiyeba, waxaanay dadweynuhu aaminsan yihiin inay muuqaalka weftigani uu tusmaynayo sida Somaliland ugu xusul duuban tahay iyagoo isku duuban taabo-gelinta qaranimadooda.
Waxase dadweynuhu ka biyo diideen Madaxweyne Ku xigeenkii hore Md. Axmed Yuusuf Yaasiin, oo ka mid ahaa xubnihii weftigii Madaxweynaha ee ka qeyb galay shirweynihii London lagu qabtay 23-kii bishii Feberwari ee la soo dhaafay. Kaasi oo Ayidsanaa go’aamadii ka soo baxay shirweynahaasi iyo in Somaliland ay wada hadal la yeelato Soomaaliya. Waxase uu mar qudha mowqifkiisii uu hinaase bedelay markii kalkan ergada weftiga loo xulay madaxweynihii hore siyaasadda macalinka ugu ahaa ee Daahir Rayaale Kaahin.
Dadweynaha Somaliland oo waayo-arag ku noqday wadciga siyaasaddu wakhti badan kumay luminaynin sababta Axmed Yuusuf Yaasiin uu wargeysyadda dalka ugu qoray war uu ku dhaliilayo in xiligan lala hadlo dalka Soomaaliya. Waxase ay naqdigiisa u arkayeen inuu ka dhashay xifiltan uu kula jiro Guddoomiyaha Xisbiga UDUB.
Waxa dadweynaha mawduucan ka doodayay ay ka midaysnaayeen inay Somaliland guul ka soo hoyn doonto wada hadalka ay la yeelanayso Madaxda dawlada wakhtigeedu gabaabsiga yahay ee Soomaaliya oo ah dal tusaale wanaagsan u ah wadammada Sagxadda hoose kaga jira qarramadda guul-daraystay ee adduunka. Waxay Soomaaliya wax ka baran kartaa hibooyinka ay Somaliland u leedahay nabadeynta iyo dhismaha Ha’yadaha dawliga ah oo iyada oo aan caalamku ku darsan hal shilin ay ku guulaysatay inay noqoto dal cagihiisa isku taagay oo haddana ka soo bilaabay meel eber ka sii hoosaysa.
Waxay Somaliland aaminsan tahay in haddii ay aqoonsi ka hesho caalamka inay door shariif ah ka qaadan karto isku dayada nabada lagaga islaaxinayo wadanka Soomaaliya.
Si kastaba arrintu ha ahaatee waxay dadweynuhu indhaha ku hayaan natiijadda ka soo bixi doonta shirka ay isku soo hor-fadhiisanayaan labada Madaxweyne ee Somaliland iyo Somalia, kaasi oo lagu wado inuu Axada fooda inagu soo haysa ka dhici doono Imaaraadka carabta iyadoo ay goob joog ka yihiin beesha caalamku.
Previous PostMadaxweyneyaasha Somaliland Iyo Somalia oo kulan ay yeesheen ka soo saaray baaq 4 qodob ka koobanNext PostXisbiga KULMIYE oo Doorashadda Deegaanka u sharaxay Murashax Kasbaday Taageero Xoogan	Blog